सेतो पानी बग्ने समस्याबाट कसरी मुक्त हुने – डा. आस्था श्रेष्ठ – MEDIA DARPAN
मिडिया दर्पण	 प्रकाशित १४ मंसिर २०७४, बिहीबार ०८:१७
डा. आस्था श्रेष्ठ
नेपालका अधिकांश महिला योनिबाट सेतो पानी बग्ने समस्याको सिकार छन् । योनि र पाठेघरमा हुने संक्रमणले महिलामा यस्तो समस्या देखिन्छ । कतिपय महिला लाजका कारण यस्ता समस्याबारे खुल्दैनन् । जसकारण झन् गम्भीर प्रकृतिका रोग लाग्न सक्छ । सेतो पानी बग्न थालेमा महिलाको योनिमा संक्रमण बढ्न थाल्छ । यस्तो समस्याको समयमै उपचार गरिएन भने पाठेघरको क्यान्सरसमेत हुन सक्छ । योनिबाट सेतो पानी बग्ने समस्याबारे एक सामग्री:
सेतो पानी बग्ने समस्याबाट बच्न योनिलाई सफा राख्नुपर्छ । सकेसम्म दैनिक रूपमा अन्डरवेयर परिवर्तन गर्नुपर्दछ । योनि सफा गर्दा सचेत हुनुपर्ने के छ भने कहिल्यै पनि योनिमा साबुन प्रयोग गर्नु हुँदैन । साबुनले सफा गरेमा योनि सुक्खा हुन्छ र चिलाउने समस्या हुन्छ । अनि, सेतो पानी बग्न थाल्छ ।
चिन्ताले चितामा यसरी पुर्याउछ